Olee otú Detuo Playlist si iPod ka iTunes Library
> Resource> iTunes> A Quick Way Ka idetuo Playlist si iPod ka iTunes
"M dị nnọọ zụtara a ọhụrụ kọmputa ma wughachi iTunes Library. Otú ọ dị, m hụrụ na ndị nile songs na iTunes, ma listi ọkpụkpọ na-arahụ. E nwere otutu listi ọkpụkpọ na-rapaara na m iPod. Enwere m ike iṅomi listi ọkpụkpọ site na iPod ka iTunes? Biko aka! "
Ma na ị zụta a ọhụrụ kọmputa ma ọ bụ n'ihi nke mberede PC okuku, na ị na biri adịkwa ihe niile i iTunes Library. Ihe kacha mfe wughachi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ bụ site na-edegharị ihe listi ọkpụkpọ site na gị iPod ka iTunes. Otú ọ dị, iTunes n'onwe ya adịghị ekwe ka ị nyefee ihe listi ọkpụkpọ site na iPod ka iTunes ozugbo. Iji na-eme nke ahụ, ị ​​ga-chọrọ onye iPod ka PC transfer dị ka Wondershare TunesGo. TunesGo na-haziri karịsịa ime ihe iTunes apụghị - Nyefee music, videos, listi ọkpụkpọ, foto na wdg si gị iPod ka iTunes.
Gbalịa na-eji Wondershare TunesGo mbubata a playlist si gị iPod ka iTunes!
Cheta na: N'oge, naanị Windows dabeere eji ga-enwe ike iji Wondershare TunesGo (Windows) nyefee playlist ha iPod ka iTunes. Dị ka Mac ndị ọrụ mkpa mbubata playlist si iPod ka iTunes Mac, ị ga-dị mwute ikwu na-eche maka ọzọ version nke Wondershare TunesGo (Mac). The Mac version anaghị akwado iPod playlist ebufe ugbu a! Ndị na-esonụ ọmụma bụ banyere otú mbubata playlist si gị iPod ka iTunes n'ọbá akwụkwọ na a Windows dabeere PC.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPod na PC
Download, wụnye,-agba ọsọ ahụ Wondershare TunesGo. Jikọọ gị iPod na PC site na eriri USB. Ozugbo gị iPod ahụrụ, TunesGo ga-akpaghị aka na-egosipụta ya faịlụ ma ọ bụ data ke akpan window dị ka snapshot gosiri n'okpuru.
Nzọụkwụ 2. Import a playlist si iPod ka iTunes
Site isi window, ị pụrụ ịhụ Playlist na n'aka ekpe. Pịa ya ikpughe niile listi ọkpụkpọ na iPod. Họrọ chọrọ Ndetuta egwu ọkpụkpọ na pịa Mbupụ na> Mbupụ na iTunes Library.
Ọ bụ ya. Na nke abụọ, ị ga-ahụ na ị na-aga nke ọma depụtaghachiri listi ọkpụkpọ site na iPod ka iTunes Library. Ọ bụ nnọọ mfe, nri? E wezụga na-ebufe playlist si iPod ka iTunes, ị nwekwara ike mbubata playlist si iPod na kọmputa na Wondershare TunesGo.
Gbalịa mee ihe ndị Wondershare TunesGo idetuo gị playlist si iPod ka iTunes ugbu a!
Ị nwere ike inwe mmasị:
Top 5 iTunes Alternatives maka Android